Iran: Heloka Bevava Ao Amin'ny YouTube, Famonoana Ho Faty Eo Imasom-bahoaka	Voadika ny 24 Janoary 2013 22:35 GMT
Zarao: Zatovolahy roa, Alireza Mafiha sy Mohammad Ali Sarvari, no novonoina ho faty notapahan-doha tao Tehran, Iran vao maraimbe tamin'ny 20 Janoary 2013 teo imason'ireo mpijery [tandremo: mampihoro-koditra ny sary] tonga nanatrika izany, araka ny filazan'ny Sampam-pahalalamabaovao Repoblika Islamika (IRNA).
Miasa ihany koa izy ireo. Nampiseho ny mombamomba azy ireo fa irakiraka (coursier) no asan'izy ireo ary…. saingy raha nitotongana isan'andro ny sandam-bolam-pirenena. Raha tsy ampy ny karaman'ny mpiasa hamelomana olona telo izay yaourt sy mofo fotsiny no hohanina. Aminà fiarahamonina izay tsy misy fanantenana intsony ny ampitso. Inona no mba azony atao? Petaka mampitaha ireo lazaina ho mpanafika roa novonoina indray alahady sy ilay tale mpanatanteraka tao amin'ny Banky Nasionaly Iraniana: “Ny ankilany nangalatra 20 dolara ka namarana ny fiainany teo amin'ny fanapahan-doha raha niditra ny faha-20 taonany. Ny andaniny nangalatra 2,6 MILIARA dolara ary mankafy ny fiainany any Karaiba sy Kanada”
Tantaran'ny Iran farany 3 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaZanakalahin'ny Mpanohitra Mpitarika Ny Hetsika Maitso Manohana Ny Fifanarahana Ara-nokleary Iraniana
5 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaNa dia Teo Aza ny Fampanantenan'ny Filoha Rouhani, Mbola Misy Hatrany ny Filma Voarara ao Iran
6 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaFantadaza iray amin'ny fanaovana fihetsiketsehana ao Iran manatevin-daharana ny fanoherana ny fifampiraharahana ara-nokleary
Vakio amin'ny teny Français, Magyar, Español, Ελληνικά, Italiano, عربي, বাংলা, Português, 繁體中文, 简体中文, English